Isikhokelo sokutya kwabantu abanesifo seswekile - South Africans with Diabetes
“Ndineswekile. Kukuphi ukutya endikutyayo? Lo ngowona mbuzo uqhelekileyo sibuzwa ngawo kubantu Bomzantsi Afrika abanesifo seswekile. Kungenxa yoko sidale esi Sikhokelo sokutya seswekile: isikhokelo ngendlela elula yokwenza ukutya ekufuneka ukukhethe, kwaye kubengakanani.
Isikhokelo sokutya samahala sabantu abaphila nesifo seswekile eswekile
Senze esi sikhokelo sokutya sasimahla ukunceda abantu abanesifo seswekile benze ukhetho olusempilweni. Dawuniloda ikopi yakho yasimahla (cofa kuDawunlowudi engezantsi) okanye uyifunde kwi-intanethi.
Isikhokelo sokutya kwabantu abanesifo seswekile dawunilowda
Yintoni oza kuyifumana ngaphakathi kwesikhokelo seswekile sokutya:
Nanga amanye amaphepha avela ngaphakathi kwesikhokelo, ukukubonisa ukuba loluphi uhlobo lolwazi oza kulufumana. Umbono kukuba iba yitshekhi yemihla ngemihla ukuze ubone ukuba loluphi ukhetho ekufuneka ulwenzile xa usitya isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa.
Kutheni senze esi sikhokelo sabantu
Sifuna ukunceda: siyazi ukuba kunokuba nzima kangakanani ukuthatha isigqibo sokuba uzokutya ntoni – kwaye kangakanani – xa unesifo seswekile. Siyathemba ukuba le ncwadi izakunceda: ikuxelela ukuba kukuphi ukutya onokukhetha kuko kwaye kukuphi kukutya okunempilo. Yenzelwe abantu abanohlobo loku-1 lwesifo seswekile kunye nohlobo lwesi-2 lwesifo seswekile
Ukukhathalela isifo sakho seswekile kubaluleke kakhulu. Ukutya okufanelekileyo kunokukunceda uphile ubomi obuqhelekileyo, obunempilo. Nantsi into onokuyikhethela wena nosapho lwakho.
» Musa ukutsiba izidlo.
» Yitya imifuno yonke imihla.
» Yitya iimbotyi ezomileyo, ii-erityisi, iilentile kunye nesoya rhoqo.
» Khetha iioyile zemifuno endaweni yamafutha aqinileyo.
» Sukusebenzisa ityuwa eninzi okanye utye ukutya okunetyuwa.
» Zama ukugada iswekile.
» Sela amanzi acocekileyo nakhuselekileyo yonke imihla.
» Zilolonge ngakumbi.
Awuwedwa kule nto!
Nceda ujoyine uluntu lwethu kuFacebook: Abantu baseMzantsi Afrika abanesifo seswekile. Okanye jonga ku www.sweetlife.org.za okanye www.pnp.co.za/livewellngesifo seswekile kunye nolwazi lokutya.
Ngaba ikhona into engekhoyo kwesi sikhokelo? Nceda usixelele apha